janvier 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
“Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo ”
Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no nakana izao tatitra izao. Fotoana notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ary natokana ho an’ny marary hoditra.
RAVONIARISON Manda, Mpitandrina, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. RAMILISON Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha, no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ny Marka 1: 40-45 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny Salamo 103: 1-5 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana izay manao hoe: « Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery ».
Ny hira FFPM 241:1,3 « Ry Jeso o! Midina» no noredonina mialoha ny vavaka fisaorana. Niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora taorian’ny feon-javamaneno.
Hebreo 13:8: “Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay” no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy.
Tao anatin’ny tononkalo izay novakian’ANDRIAMAHATANA Nomena, mpampianatra K 3 no nanamafisana ny hafatra hoe: “Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay”.
Taorian’izay hafatra fohy izay, nohirain’ny fianakaviam-ben’ny Sekoly alahady ny hira 780:1 “He! Dera, laza, hery.”
Mialoha ny namakiana ny Soratra Masina, nohiraina ny hira FFPM 203: 1, 2 « Ry Rainay be fitia ». Mialoha ny vakiteny dia niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny Fanahy Masina ANDRIAMASINORO Erika ary notohizana tamin’ny famakiana ny Teny, araka ny perikopa, Testamenta taloha: 2Mpanjaka 5:15-27. ANDRIAMASINORO Tantely no nanao ny vakiteny Filazantsara sy ny Epistily: Marka 1: 40-45; 2Petera 1:1-2.
Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FF 1 “Mahatoky ka tokony ekena” , dia niroso tamin’ny toriteny izay notanterahin-dRAMILISON Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha.
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny Marka 1:40-45, izay miresaka momba ny boka nitaraina tamin’i Jesoa sady nandohalika teo anatrehany.
Hevi-panahy lehibe ao anatin’izany:
Rehefa nahita ny fanasitranana, ny asam-pamonjena, ny fahagagana nataon’ i Jesoa dia nino sy nanantena fa hahazo anjara amin’izany koa ilay boka. I Jesoa no manana fahefana (and.22) sy nampianatra, nanasitra demoniaka, …Naniry hanatona sy hahita an’i Jesoa ity boka ity. Tsy nahasakana azy ny lalàna nisy eo amin’ny fiarahamonina. Nandray ny fitarainany ny Tompo ary nahasitrana ny habokany.
Maneho ny maha izy Azy Jesoa eto:
Mpanafaka amin’ny aretina sy ny fahalotoana
Mandray an-tanana ny mila vonjy, miombona aminy ary manasitrana ny Tompo. Ny habokana eto dia endriky ny fahalotoana izay hatahorana. Tsy hoe vokatry ny fahotana natao fa aretina tsy azo sitranina. Ilay boka eto no mila vonjy, miaina ao anaty loto, mitoka-monina, voahiliky ny olona rehetra. Ny fianakaviana tsy afaka mamangy. Araka ny Levitikosy, ny olona tratry ny habokana dia olona maty nefa velona ihany. Tahaka ny olona anaty fisaonana mandrakariva ireo olona ao anaty ny habokana.
Nihetsi-po ary onena tokoa i Jesoa, nahita sy nihaino ilay boka. Andriamanitra Izay hivavahana dia masina, ny faholotoana anefa tsy miaraka amin’ny fahamasinan’ Andriamanitra. Ny olona maloto dia tsy afaka miaina fiainana feno fahafenoana. Heverina ho toy ny olona maty. Tsy nisy teo amin’izy ireo ny fanompoana an’Andriamanitra, na dia ny ara-panahy aza.
Onena Jesoa satria nitaraina, nandohalika tamin’i Jesoa ilay boka: ny fihetsika sy ny fiteniny dia naharesy lahatra ilay lehilahy fa ao amin’i Jesoa irery ny fahafahana sy fahefana hahatonga azy ho voadio. Amin’ny maha Andriamanitra Azy dia nasehon’i Jesoa fa mandray an-tanana ny mila vonjy Izy, miombona amin’ity boka ity koa Izy. Nanao fihetsika Jesoa ary naninjitra ny tanany, ka nanendry sy namonjy azy. Zavatra tokony tsy azo atao nefa no nataon’ i Jesoa satria tsy nampahatahotra Azy ny habokana, tsy hifindra Aminy ny fahalotoana. Nanana finoana ilay boka satria mahay manasitrana Jesoa, mahay ny zavatra rehetra, hanafaka amin’ny faholotoana raha miombona Aminy dia manasitrana tokoa Izy.
Mila fahagagana lehibe avy amin’Andriamanitra izany fanasitranana izany. Nilaza Jesoa hoe: “Mahadiova ianao”, sitrapon’ ny Tompo ny hanadio azy, afaka izy ary lasa niaraka tamin’izay ny fahalotoana rehetra. Tsy nisy fomba natao fa ny Tenin’i Jesoa Kristy velona no nahazoana izany fanasitranana izany.
Isaia 53:4: “Nitondra ny aretintsika tokoa Izy, sady nivesatra ny fahoriantsika”. Jesoa Ilay Zanak’Andriamanitra velona, manaporofo ny fahefany mpanasitrana sy mpanafaka. Tsy amin’ny ota ihany fa amin’ny aretina sy izay zavatra rehetra manahiran-tsaina ny olombelona. Ny famonjena natolony, nomena antsika ho fanasitranana ara-panahy mba hananantsika antoka ny fiainana mandrakizay.
Inona anefa no endriky ny habokana amintsika ankehitriny sy amin’izao andro moderna izao?
Maro tokoa ireny raha amin’ny vaninandro ankehitriny: ao ny boka olana maro samy hafa, isan-karazany, bokan-trosa, bokan’aretina (manjo, nitaiza nandritra ny taona maro), faharatsiana, habokana ara-panahy: tsy mety miova fo, fa mijanona mifikitra amin’ny fahamaizinana mandrakariva, mila sitranina ary mila hoentina eo amin’ny Tompo ireny.
Ny fahabokana dia karazana fahafatesana ara-pinoana sy ara-panjakana. Ny fanasitranana kosa dia karazana fitsanganan’ny tena amin’ny maty. Ao amin’io habokana io no hahafahana mamantatra ny mariky ny fahotana, izay mahavita manalavitra antsika amin’Andriamanitra.
Taomina isika mba ho sahy hanatona an’i Jesoa fa tsy haka tahaka mitovy amin’ilay boka. Hilaza Aminy ny aretintsika, ny manahirana, mandohalika, mivavaka, mitondra am-bavaka, mitaraina Aminy andro aman’alina. Ny Tompo dia mpanadio, mpiantra antsika, Izay manafaka amin’ny mety ho endrika habokana. Matokia ny Tompo fa hahazo valim-bavaka ianao.
Manoro lalana ny olom-boavonjy
Voavonjy tao anatin’ny aretina ity lehilahy ity. Mandidy ny olona hijoro vavolombelona, hitandrina ny Tenin’ ny Tompo.
Eto dia nilaza Jesoa ny mba tsy hilazana na amin’iza na iza ny zavatra niseho, misy teny miafina mesianika ao. Nisy demonia saika hilaza ny momba azy tao.
Raha ny fantatra ety am-boalohany, ny maha Mesia an’i Jesoa dia tsy hanaraka amin’izay tian’i Jesoa intsony ny fientanam-pon’ny olona, mahita hoe tonga ny Mesia, miaina ao anaty fanetrentena.
Mbola tsy tonga ny fotoana hanehoan’ny Tompo ny maha izy azy, raha tsy efa natolotra tao amin’ny sahan’i Gestemane Izy.
Tsy nahatandrina ny Tenin’i Jesoa Kristy ilay boka. Nifanohitra tamin’ny toro-lalana nomen’i Jesoa no nataon’ilay boka. Fomban’i Jesoa no mampitandrina izay manaraka Azy, mba hananana fanoloran-tena feno no takina.Vokatr’izany, tsy afaka niditra tao an-tanana intsony Jesoa. Fa afaka manatona Azy kosa ny olona.
Indraindray ny fahasoavana azontsika no anilihantsika ny Tompo. Betsaka ny antony mahatonga ny olona tsy mahatandrina ny Tenin’ny Tompo: mety hafanam-po, tsy nahadinika ny vokatry ny zavatra atao, na sendra hafaliana tsy omby tratra, … Mety hanimba ny planin’Andriamanitra izany amin’ny fitoriana ny vaovao mahafaly satria manilika ny Tompo amin’ny lalana tokony hizorany izany.
“Fa aoka ho mpankato ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.” Jakoba 1:22
Mba hijoro vavolombelona:
Nangataka Jesoa tamin’ilay boka ny andehanany hiseho any amin’ny mpisorona. Izany dia fanajana ny soratra ao anatiny lalàna. Mpisorona no afaka manamarina fa boka ity lehilahy ity ary efa voadio. Afaka mandeha manatanteraka fanompoana, sorona ary fanatitra. Tsy notanterahiny anefa izany sorona sy fanatitra nasain’i Jesoa nataony izany. Tsy miala amin’ny lalàna Jesoa, ary averiny amin’ny maha olona manontolo, amin’ny fiarahamonina. Ny mpisorona irery no afaka hilaza sy hanamarina fa voadio ilay boka.
Raha maniraka ny Tompo, dia misy tanjona hafa efa nomaniny ao. Ny hananantsika fiainana azo antoka sy tanteraka. Aza miala amin’ny torolalana satria iny no mahasoa antsika. Andriamanitra mahatakatra sy mahalala ny zavatra rehetra, manoro lalana Izy ary araho ara-bakiteny ny Tenin’ny Tompo. Henoy Jesoa, dia manana hery isika hirosoana amin’ny tsara hatrany.
Vonjen’ny Tompo isika, ho afaka amin’ny fatorana rehetra, borahy Aminy ny olana rehetra. Hikatsaka sy hihaino ny Tenin’Andriamanitra, fa kosa tsy hanao toy ilay boka.
Taorian’ny feon-javamaneno dia natao ny vavaka fifonana sy famelan-keloka ary noredonina ny hira FF 22 : « Tsy mendrika ahy » sy ny hira FFPM 183:1,2 « Midina ry Fanahy o ! » ary ny fanekem-pinoana laharana faha 3 , niarahana tamin’ny Fiangonana.
Ny Mpitantsoratra RAKOTOMANANA Andry no nanao ny filazan-draharaha taorian’ny andinin-tSoratra Masina IKoritiana 3:17b “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany ». Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavin’ ny finoana:
Fisokafan’ny Oniversity FJKM RAVELOJAONA eo Ampandrana manomboka ny 01 febroary 2021;
Akany Fialofana Tangaina: fanasana fanompoam-pivavahana noho ny fanarenana ny toeram-pisakafoana ao amin’ny Akany.
Fanentanana sy fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana (elanelana 1 metatra, arovava, manatona ny toby fitsaboana raha misy tsy fahasalamana) ;
Alahady fahaefatra : Ankatoky ny Fandraisana (eo anelanelan’ny Fanompoam-pivavahana roa) ;
Rakitra am-baravarana : noho ny faha 25 taonan’ ny Synodamparitany ;
Mitohy ny fianarana katekomena;
Komitin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taona :
taratasy fisaorana noho ny fotoam-pankalazana ny 24 janoary 2021;
fiantsoana ny rehetra hanolotra tahiry ho an’izay manana : rakipeo, rakitsary fiainan’ny Fiangonana FJKM Amparibe Famonjena, …)
fivoriana: solotenan’ny sampana ao anatin’ny komity ny 03 febroary amin’ny 6ora hariva.
Nisy feon-javamaneno fohy taorian’ny vaovaom-piangonana.
Natolotra teo am-pitsanganana ny fanatitra tamin’ny alalan’ny hira FF 2:1 “He tonga ho antsika”. Rehefa izany dia nanao ny anjara hirany ny STK.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka ary nofaranany tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.
Natao ny hira FFPM 625:1, 2 “Mpamonjy soa malala o! ” ary noredonin’ny Fiangonana niaraka ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano ary nohiraina ny hira “Mialoka Aminao” izay nofaranana tamin’ny “Amena”.
Mpitendry orga: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto
Publié le 25 janvier 2021 13 février 2021
ALAHADY 24 JANOARY 2021 ALAHADIN’NY FIRAISAN’NY SAMPANA
Fanokafana ny taom-pankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana
Faha 30 taonan’ny SAFIF, SVM, SLK, SMZM, STAF ; faha 20 taonan’ny RFF
Fitondrana amim-bavaka ny FFKM “ Fa masina ny Tempolin’ Andriamanitra, dia ianareo izany “ I KOR 3 : 17b
“ Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo ”
Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no nakana izao tatitra izao. Fotoan-dehibe eo amin’ny tantaran’ny Fiangonana androany satria fanokafana ny taom-pankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 160 taonany; faha 30 taonan’ny Sampana Fifohazana, Sampana Vokovoko Manga, Sampana Lehilahy Kristiana, Sampana Mpiangaly Zava-Maneno, Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena ; faha 20 taonan’ny Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly. Noho izany dia solotena avy amin’ireo rafitra ireo no nandray anjara nandavorary ny fotoam-bavaka manontolo. Naneho firaisana ny sampana velona rehetra nanao ny fanamiany avy ary efa nisy toerana voatokana isaky ny fikambanana.
RATIARISON Joris Edgard, Filohan’ny Firaisan’ny Sampana no nitarika raha RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahana. Ny fepetra ara-pahasalamana dia notandrovana na teo ivelany (arovava, fanasana tanana sy fakana maripana) na tao anaty trano fiangonana (elanelana, olona 3 isan-dabilio ny teny ambany).
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny SAL 145: 1-10 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana izay manao hoe: « Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ; ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona ; ary ny fahalehibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy sy hihoby ny fahamarinanao. Mamindra fo sy miantra Jehovah : maharipo sady be famindrampo Izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah ; ary ny fiantrany dia eny amin’ny asany rehetra. Jehovah ô, midera Anao ny asanao rehetra ; ary ny olonao masina misaotra Anao ». Ny hira FFPM 435 « IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE ?» no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora, ny efa niomana tamin’izany.
ANDRIAMAHERY Hanitra, mpampianatra Sekoly Alahady K2 no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny ASA 4: 12 manao hoe: » Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena « . Naverin’ny Fiangonana novakiana izany. Ny tantara nakana hafatra androany dia tena nisy izay momba ny fiaran-dalamby feno mpandeha sendra andro ratsy : nisamboaravoara ny ranomasina, niakatra avo be ny onja ka tonga hatrany amin’ny tetezana. Najanon’ilay mpamily tampoka ny fiaran-dalamby sao dia tsy zaka noho ny kapoky ny ranomasina. Nampirisika azy ny mpandeha rehetra handeha haingana. Tsy naharitra ilay mpamily ka niainga, segondra vitsy monja taorian’izay ihany anefa dia lasan’ny rano mahery avokoa izy ireo ka maty. Nahatoky ny hamafin’ny tetezana izy ireo. Isika koa toy ny mpandeha hamita dia lavitra eo amin’ny fiainana ary samy maniry ho any amin’ny fiainana mandrakizay.
Aoka isika tsy hitoky afa tsy amin’i Jesoa Kristy irery ihany amin’ny fotoana rehetra, manontany Azy vao manapa-kevitra fa tsy ny mifanohitra amin’izay na araka izay tiantsika. Anarana tokana ihany no afaka mamonjy antsika.
Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 760 : 3 “ AZA MBA MANADINO NY RAY SY RENINAO ”. Nisy vavaka. Notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra avy hatrany ny fotoana.
Nohiraina ny hira Fifohazana 205 : 1 « RANON’AINA » dia nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ANDRIANARY Rado (Filohan’ny SAFIF). Namaky ny Testamenta Taloha RAZAFIMBELO Holy (Filohan’ny SVM) raha RANIVOSON Toky (Filohan’ny STAF) no namaky ny Filazantsara ary RABEZANDRINA Solohery (Filohan’ny SLK) ny epistily, araka ny EKS 33 : 12-23 ; MAT 3 : 13-17 ; ASA 17 : 22-34. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FF 10 : 2 “ MIVAVAKA AHO SATRIA ” dia toriteny no nanaraka izany.
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny ASA 17 : 24-31. Sarobidy izao fotoana izao. Feno tempolin-tsampy ao Areopago. Ny Grika dia tena tia mivavaka eo amin’ny alitaran’ny andriamanitra tsy fantatra, teo no nitorian’i Paoly ny Andriamanitra velona sy marina nivavahany. Zavatra roa no notoriny:
Ilay Andriamanitra Mpahary izao rehetra izao dia tsy tahaka ny andriamanitra hafa
Ao amin’ny EKS 33 : 12-21 no misy fanambarana nataon’i Mosesy sy ny hataka nataony hanafahana ny zanak’Israely. Ny NOM 6 : 25-26 dia ilay tsodrano efa fandre maneho ny tavan’ Andriamanitra mamirapiratra mitarika hivoaka ny tany Egypta ho any Kanana ka ho mpandresy hitondra firenena hiakatra ho amin’ny fiainana tsara mihoatra, miala ny ratsy rehetra, feno fiadanana sy fitahiana.
Mosesy dia nitarika ny olona handova ny tany tondra-dronono sy tantely. Mampiseho ny heriny ny Tompo amin’ny fitondrana ity firenena ity. Ao anatin’izany no anaovantsika ny fankalazana isan-karazany, tahaka ny miaraka amin’i Mosesy koa izany isika eto Amparibe. Ao anatin’ny komity dia misy Birao, tsy zavatra mifanojo akory izao fa misy fandaharan’Andriamanitra ho an’ ny fiainan’ ny Fiangonany. Taomina izay manana andraikitra rehetra fa ny Andriamanitra ivavahantsika no milaza aminao hoe hoento miakatra ity firenena ity sy izao Fiangonana Amparibe Famonjena izao. I Mosesy dia mitarika ny olona :
hitodika amin’ Andriamanitra ;
hanome voninahitra an’Andriamanitra ;
hanandratra ny asam-pamonjen’ Andriamanitra ho an’ ny olona rehetra.
Hatolotr’ Andriamanitra antsika ny hahalavorary izany.
Andriamanitratra mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony
Andriamani-tsy izy avokoa ireo ivavahana ireo, lafiny telo no asehon’i Paoly eto :
Andriamanitra no ivelomana, ihetsehana sy iainana
Manendry andro hitsarana izao rehetra izao Izy ary efa voaomana izay tsara
Mandidy ny olona rehetra Izy hibebaka. Voaheloka mandrakizay izay tsy mibebaka. Araka ny MAT 3 : 17, Jesoa izay tian’ Andriamanitra indrindra dia iraka azo antoka fa hahavita ny famonjena ety ambany masoandro.
Raha miantsampy amin’ Andriamanitra isika dia :
Hahita fahombiazana amin’izay hatao ;
Hisantatra ny fahatsarana rehetra ;
Hotanteraka ny fanambarana rehetra ary hazoto hanompo isika.
Amin’izao alahady natokana ho an’ny fitondrana amim-bavaka ny FFKM izao dia tokony ho lasa tena iray ao amin’i Jesoa Kristy ny Fiangonana na samy manana ny azy aza.
Tsarovy fa tempolin’ Andriamanitra ianareo ka aoka hitandro izany fahamasinana izany.
Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena!
Nisy feon-javamaneno fohy dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny hira VVM 61 : 1 “ ASA MAHASOA NY ANTSIKA RE ” (feo FFPM 73). Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ao amin’ny ROM 8 : 33 ; I JAO 5 : 11 hoe : Iza no hiampanga ny olom-boafidin’ Andriamanitra ? Andriamanitra no manamarina azy. Ary izao no fanambarany : Fiainana mandrakizay no omen’ Andriamanitra antsika, ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany “. Natao ny hira FF 37 : 2 “ FA TSY MISY FAHORIANA “. Ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona teo alohantsika (Lah.4) no nanaraka izany. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina. Nanao ny hira “ ISIKA ” ny RFF. Filazana ny vaovao no nanaraka izany.
RAZAFIMAHARO Maminirina no nilaza vaovao tokony hofantarin’ny Fiangonana ary hotanterahiny sy hoentiny amim-bavaka. Natombony tamin’ny famakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I KOR 3 : 17b izany. Ireto no santionany amin’izany :
Ny biraon’ny rafitra rehetra dia hivory handinika tetibola 2021 ny alarobia 27 janoary 2021 amin’ny 6 ora hariva ;
Hisy mpihevi-draharaha tsy ara-potoana ny sabotsy 30 janoary 2021 amin’ny 8 ora maraina ;
Misy tolotr’asa ho mpamily ny fiaran’ny Fiangonana, izay liana dia manatona ny komitin’ny mpiasa na ny Biraom-Piangonana.
ANDRIAMASINORO Tantely no namaky ny vetsovetsom-pon’ny Fiangonana nisaotra sy nangata-bavaka androany. Natombony tamin’ny famakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL sy II KOR 3 : 15b izany. Ireto avy no hira nangatahina “ MANDEHANA MANARÀNA ”(RFF) ; “ KANTO ” (RFF) ; HF 21 “INONA NO HAVALIKO “. Ireo olona ireo dia misaotra an’ Andriamanitra noho ny tsingerintaonan’ny RFF sy mangata-bavaka ho amin’ny tohin’ny asa, ary misaotra noho ny taon-dasa sy mametraka ny taona vaovao eo ho eo ambany fahasoavan’ Andriamanitra.
Natolotra ny fanatitra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 45 : 4 “HE TONGA HO ANTSIKA “. Notohizana avy hatrany tamin’ny Asa Vavolombelona ny fotoana.
Nizara roa mazava ny fotoanan’ny Asa Vavolombelona anio : ny voalohany fandraisana ny sakramentan’ny Batisa raha fanokafana taom-pankalazana an’ Andriamanitra an’ny Fiangonana sy Sampana velona voatanisa etsy ambony no faharoa. Natao ny hira 448 : 1 “NITONDRA NY ZAZA NY RENY “ teo am-piakaran’ny ray aman-dreny teny amin’ny alitara.
Ireto manaraka ireto no momba ny nandray izany fahasoavana izany :
RALANDISON Koloina Maeva
ANDRINTSOA Andy Victoria
RASAMIMANANA Aro Steeve
RAHARIMAMONJY Faniriantsoa Alex Hervé
RAMANIRAKA Fitiantsoa Mendrika
Teo am-pamonjena toerana ny mpanolotra zaza dia nisy feon-javamaneno hiomanana amin’ny tohiny.
Ny fizotry ny fanokafana ny fankalazana kosa dia fintinina toy izao :
Novakiana tsirairay ny anarana sy andraikitry ny komitin’ny K160 ary najoro teo amin’ny alitara ny Birao, ny komity teny an-toerana ho fantatry ny Fiangonana, 17 izy ireo. Rehefa izay dia notononina ny Filohan’ny sampana hanao fankalazana mandritra ny taona, najoro teny an-toerana ny mpikambana. Natolotry ny Mpitandrina ny Teny avy ao amin’ny Soratra Masina, nambarany koa ny anjara andraikitry ny Fiangonana manoloana ny olom-boafidy. Nisy vavaka. Natao ny fanolorana ireo tompon ’andraikitra ireo ho afaka hanao ny fankalazana mandritra ny taona, natolotra azy ireo ny tsodrano hahafahany mamita ny asa masina nekeny hotanterahina. Nandalo tsirairay teo anoloan’ny Mpitandrina izy ireo ary mamonjy ny toerany.
Nosokafana ny “ banderole ” teo an-tokotany avy eo, ka solotena isaky ny rafitra voakasika ihany no nivoaka tany. Feon-javamaneno no natao nandritra izany ary naseho mivantana tamin’ny fafana ny horonantsary. Nitehaka ny Fiangonana nony afaka ny lamba fotsy. Ny Filohan’ny K160 RAMAMANARIVO Andry no namaky ny soratra voarakitra amin’izany. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny fidiran’izy ireo ny kianjan’ny tempoly ary nandray anjara fitenenana ny Filohan’ny K160 namintina ny vina ary nanentana ho amin’ny fiombonana ary nivavaka. Natsangana ny sampana rehetra nanao ny hira “ ANDRIAMANITRA FITIAVANA ” (Henry RATSIMBAZAFY). Nambaran’ny Mpitandrina araka ny fomban’ny Fiangonana fa misokatra ny fankalazana. Nitehaka ny Fiangonana.
Vavaka fangataham-pitahiana no nanaraka izany, izay notarihan’Andriamatoa RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina.
Nisaotra noho ny toriteny izy, nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe hahatsapa fa nanana tantara ity taona 2021 ity ; ny Firaisan’ny Sampana ; ny rafitra mijoro rehetra ; ny fiainana ny Teny fanevan’ izao fankalazana izao ; izay maniry hiditra SEFALA sy katekomena ; ny Fiangonana miray ao anatin’ny FFKM ho vavolombelona manerana izao tontolo izao ; ny fikasana rehetra ho amin’ny fiainan’ny Fiangonana manontolo ; ny sahirana sy tsy salama ary mana-manjo ; ny manana hataka manokana rehetra sy izay nanao fanati-pisaorana sy nangata-bavaka. Izany dia nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”.
Natao ny hira HF 43 “ VAVAKA ” dia notononina ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira VVM 28 : 3-4 (feo FFPM 312) nofaranana tamin’ny Amena. Nisy vavaka mangina sy fiantsoana ny Trinité. Nifarana tamin’ny 12 ora sy 37 minitra ny fotoana.
Nivoaka tsikelikely nanaraka fandaminana ny Fiangonana. Nisy sakafo sy rano nozarain’ny K160 sy ireo sampana 6 teo an-tokotany.
Nitendry: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly ZavaManeno
Fafana: RAJAOFETRA Voahangy
Fanamafisam-peo: RANDRIAMAHEFA Tinarivony; RANDRIAMBOLOLONA Mamisoa
Naka sary: RAHARIJAONA RASETAMANANA Solofonirina
Nandray an-tsoratra ny fotoana: RALAIARIMANANA Narindra
Publié le 4 janvier 2021 13 février 2021
ALAHADY FAHA 03 JANOARY 2021
MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO
“Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosony, dia Kyrosy, izay notantanako tamin'ny tànany ankavanana, mba handreseko firenena eo anoloany... » . Isaia 45 :1-8
Isaorantsika ny Tompo Andriamanitra ary deraina sy ankalazaina tokoa ny Anarany Masina. Andriamanitra mahery sy be voninahitra Izy, mbola mitahy antsika sy mitantana ny fiainantsika ka nomeny ity taona vaovao 2021 ity isika.
Ity no alahady voalohany amin’ity taona vaovao 2021 ity. Alahadin’ny Epifania izay manambara sy maneho fa mamangy ny olony, Andriamanitra. Amin’ity volana janoary ity dia hibanjina ny lohahevitra hoe : “MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO” isika eto anivon’ny FJKM.
Ramatoa PERLE, Mpitandrina miana-draharaha eto amin’ny Fitandremana no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny litorjia fahatelo fampiasa eto amin’ny sahan’ny FJKM no notanterahina . Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra izay miofana sy miana-draharaha eto amin’ny Fiangonana ihany koa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny fitantanana ny Latabatra Masina tamin’ny fanatanterahana ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia niarahan’ireo Mpitandrina mirahavavy voalaza etsy ambony nifarimbonana
Nisy ny fiarahabana ireo mpianakavin’ny finoana izay nahatratra ny tsingerintaona nahaterahany tamin’iny volana desambra lasa teo iny. Miisa 65 mianaka izy ireo no tonga nanatanteraka ny raki-pisaorana teo amin’ny alitara masina ka 36 no tamin’ny fidirana voalohany ary 29 kosa no tamin’ny fidirana faharoa.
Androany ihany koa no notanterahina ny fiarahabana ireo Zokiolona nahatratra 70 taona noho miohatra ary miisa 176 izy ireo no notolorana ny sombim-pifaliana.
Tsy latsa-danja tamin’izany ny fiarahaban’ny Fiangonana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa RAMINO Vololona Razafindramanga, noho ny fahatratrarana izao taona vaovao izao.
Ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno no nisahana tanteraka ny fitarihana ny Fiangonana tamin’ny hira.
NY diakona ao amin’ny vaomieran’ny Aim-panahy sy ny Fifandraisana no tompon-draharaha.
Ny Salamo faha 47 no nentina niderana sy nisaorana an’Andriamanitra.
Ny hira faha 746 “Mifalia ry sakaiza” no nanombohana izao fanompoam-pivavahana izao ho fiderana sy fisaorana ny Tompo Andriamanitra noho ny taona vaovao izay nomeny.
Izao no vavaka fiderana nataon’ny Fiangonana :
“Ry Tompo Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina o, tafavory eto izahay amin’ity alahady voalohany amin’ny taona ity hanome voninahitra sy hanatitra fisaorana ho Anao Tomponay. Midera Anao izahay noho ny fahefana ambony izay anananao, fa eo an-tananao avokoa ny fanjakana sy ny fanapahana rehetra hatramin’izay ka ho mandrakizay. Misaotra Anao izahay noho ny asanao tsy takatry ny saina amin’ny fiainanay, fa raha namakivaky iny taona lasa iny izahay dia teo mandrakariva Ianao, niahy sy niaro anay. Amin’ity taona vaovao ity dia mbola matoky hatrany izahay fa mbola hanehoanao ny haben’ny fahasoavanao sy ny fitiavanao Isaoranay ny antsom-pitiavanao nitaomanao anay hahalala Anao bebe kokoa ao amin’i Jesoa Kristy Zanakao. Ny Fanahy Masina anie hiasa aty anatinay, hahaizanay mibanjina Anao ka hahitanay ny herinao sy ny fahalebiazanao, hitomboanay amin‘ny finoana sy ny fahatokiana Anao hatrany. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tomponay, Amen!”
RAKOTONDRAZAKA Lalasoa mpampianatra K5 no nanatanteraka izany.
Ny Jaona 15:2 no nitondrany ny hafatra: “ Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny, mba hamoa bebe kokoa”.
Ny hoe « Amboarina » dia tapahina, hanesorana , diovina, rantsanana ka amin’izany dia lasa maniry tsara ilay voninkazo.
Ny fanamboarana dia tsy hoe sazy fa fanefena.
Nisy ny tantara kely nentina nanamafisana izany Soratra Masina izany dia ny tantaran’ireo voninkazon’ olona mpifanolobodi-rindrina ka ny an’ny anankiray naniry tsara fa ny ny an’ny iray kosa zara raha naniry.
Rehefa notapahina anefa ilay tsy naniry tsara dia miova ny faniriny fa lasa naniry tsara io voninkazo io.
Nisy ny vavaka izay nangatahana tamin’ny Tompo mba hanefeny ny vahoakany ho vanona ao amin’ny Tompo.
Natao ny hira 750 and. 1, 2 « Dera, Laza ry mpanjaka » ary niroso amin’ny vavaka mialoha ny Tenin’Andriamanitra ny Fiangonana.
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nanatanteraka vavaka Ramatoa Bodo RAHARIJAONA RASETAMANANA ary izy rahateo no namaky manontolo ireo perikopa izay voalahatra hovakiana androany.
Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Isaia 45: 1-8. Ny Testamenta Vaovao kosa dia nalaina tao amin’ny Jaona 1: 43–51 ary ny epistily dia ny 1 Timoty 1:12-17.
Taorian’ny famakiana ny Soatra Masina dia niarahan’ny Fiangonana noredonina ny hira 742 and. 1 «Zanahary no maha ela »
Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Teo am-piandohana dia nanamarika ny Mpitandrina fa manana lohahevitra lehibe hodinihana isika eto anivon’ny FJKM izay hobanjinina mandritra ny efa-taona dia ny hoe : « MIORENA TSARA, AZA MIOVA » 1 Kor 15 :58. Izany dia araka ny Synoda lehibe izay tokony notontosaina tamin’ny taona lasa iny, kanefa dia hotanterahina kosa amin’ity taona ity.
Amin’ity volana janoary ity kosa isika dia manana ilay lohahevitra hoe : « MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO »
Ny Teny araka ny Isaia 45 : 1-8 no nitondrana ny vatsim-panahy ho an’ny mpianakavin’ny finoana ho amin’izao taombaovao izao.
Ity perikopa ity dia ao anatin’ny fizarana faharoa amin’ny boky. Manambara fampiononana ho an’ny Jiosy tany amin’ny fahababoana.
Miantefa manokana amin’i Kyrosy mpanjaka ny hafatr’Andriamanitra eto. Izy izay manosotra an’i Kyrosy.
Lohahevitra telo no hosintonina araka izany :
TOMPON’NY FIFIDIANANA SY NY FIANTSOANA NY TOMPO (and. 3,4)
“Izaho no Jehovah Izay miantso anao amin’ny anaranao” (and 3).
I Kyrosy dia mpanjaka persa, noho izany dia jentilisa nefa nosoran’Andriamanitra ho famonjena ireo Jiosy izay babo any Babylona.
Ny hosotra nataon’i Jehovah tamin’i Kyrosy dia ho fanafahana indray ny zanak’israely ka hampodiana azy ireo amin’ny tany Kanana.
Ny hevi-panahy ambaran’izany dia miantso ny olona rehetra ho amin’ny famonjena Andriamanitra mba ho fiasana eo am-pelatanany. Hain’Andriamanitra ny mampiasa ny olona rehetra mba hahatontosa ny fikasany.
Hambara ho mpanjaka voairak’Andriamanitra i Kyrosy ary nantsoina mihitsy hoe : “voahosotra”
Ny hoe : voahosotra dia ny mesia no fahafantarantsika izany.
Ny voahosotra koa anefa dia olona nofidian’Andriamanitra manokana hanatanteraka ny asany.
Araka izany ary dia miantso olona ho amin’ny fanompoana ny Tompo, tsy manavaka izy fa izay manaiky ny antsony dia hosorany ho amin’ny fanompoana ka hitondra fanafahana ho an’ireo mbola babon’i satana.
TOMPO TOKANA NY TOMPO (and. 5-6)
« Izao no Jehovah fa tsy misy hafa ».
Ny hoe : IZAHO eto dia Andriamanitra manambara ny tenany.
Tsy misy hafa ankoatra Azy. Amin’ny maha tompo tsy toa Azy dia manambara ny tenany amin’ny fahefana no antony nitenen’Andriamanitra izany.
Ny maha tokana an’Andriamanitra dia ny fanehoany fa eo an-tànany irery ihany ny fiainan’ny vahoakany ka marina sy mahitsy mandrakariva Izy, amin’ny fomba rehetra entiny mitondra sy mamonjy ny vahoakany.
Tokona hotsarovana anefa fa tsy ho an’ny Israely irery ihany no maha tokana an’Andriamanitra fa ho an’izao tontolo izao mihitsy, ka isan’izany i Madagasikara. Izy no nanao ny alina sy ny mazava ho an’ny rehetra ary tsy misy Andriamanitra tahaka Azy. Izy irery no tena Andriamanitra ary tsy voafetra izany fahefany izany. Izy no tompomarika amin’ny famonjena ny olony.
Raha izany no Andriamanitsika, inona no tokony hampanahy sy hahakivy antsika nefa efa eo Aminy ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra. Ny angatahan’ny Tompo amintsika fotsiny dia ny fahatokiana Azy.
Aminao àry : Iza moa Jesoa ? Meteza hanaiky toa an’i Natanaela ka hiteny hoe : « Ianao no Zanak’Andriamanitra, Ianao no mpanjakan’ny Israely ».
TOMPON’NY FITAHIANA NY TOMPO (and. 7,8 sy and. 2,3)
“Handravona ny mikitoantoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy”.
Asehon’Andriamanitra eto fa Izy no hanafaka antsika amin’ny kitoantoana eo amin’ny fiainana. Andriamanitra no hanala ny sakana izay tsy vitan’ny olona atao. Ho lasa fitahiana kosa izany ho an’izay manaraka Azy sy miankina Aminy.
Omen’Andriamanitra taona vaovao isika amin’izao 2021 izao. Isaorantsika Azy izany. Mbola miafina amintsika anefa izay hitranga rehetra mandritra ity taona ity, fa anio kosa ny Tompo manome toky fa raha avelatsika handroso eo anoloantsika Izy, dia Izy no handamina sy handravona ny kitoantoana amin’ny lalantsika . Izy hanome ny rakitra sy harena ho antsika na ara-panahy na ara-piainana. Ny fanalahidin’izany dia ny fanaovana an’Andriamanitra ho eo aloha amin’ny zavatra rehetra.
Miorena tsara ao amin’ny Tompo!
Manoloana ny Tenin’Andriamanitra dia mahatsiaro tsy tanteraka isika koa izao no votoatin’ny vavaka fiaiken-keloka notanterahan’ny Fiangonana.
« Ry Tompo tsara indrindra o, misaotra Anao izahay fa nasehonao ny fahalebiazanao sy ny fahamarinanao izay mitaona anay indray hibebaka eto anatrehanao. Nasehonao fa Andriamanitra Tompon’ny Fiantsoana Ianao. Tsy tanteraka izahay fa mandà ny antsonao. Mamindrà fo aminay. Ny ranao anie hanamarina anay. Ny fanahinao anie hanavao anay, hananay fitondran-tena masina sy hiandrasanao anay amin’ny maha olom-boantsonao anay. Amin’ny anaranao Jesoa Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen ! »
Ny hira 517 and. 3 no natao taorian’izany.
Izao no teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana :
Hoy ny Tompo : «Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao”. Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina” .
Ny fanekem-pinoana apostolika no niarahan’ny mpianakavin’ny finoana natao.
Ny hira 747 : and. 1, 3 no notanterahina taorian’izany.
Ny mpitantsoratry ny Fiangonana RAKOTOMANANA Andrimbazotiana no nanatanteraka izany.
Ny Deoteronomia 4 : 4 no nentiny niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nanombohana ny fanambarana ny asan’ny Fiangonana.
Hotanterahina eny amin’ny Coliseum Antsonjobe ny alahady faha 17 janoary 2021 ny fanompoam-pivavahana fanamarihana ny taom-piasana 2021 sady fiarahabana ny filohan’ny FJKM. Ny fanombohan’ny fanompoam-pivavahana dia hisy indroa miantoana amin’ny 07 ora maraina sy amin’ny 11 ora . Entanina isika mpianakavin’ny finoana hanatrika izany.
Ny alahady 10 janoary no fiarahabana ny mpanao raharaha.
Ny alahady faha 24 Janoary no alahadin’ny firaisan’ny sampana ary fanokafana ny taom-pankalazana ho an’ireo Sampana manatanteraka izany ny taona 2021.
Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny tombon’androm-pahavelomana nomeny ny Fiangonana sy ny mpianakavin’ny Finoana.
– Nisaotra an’Andriamanitra sady nankasitraka ny Fiangonana noho ny fahavitan’ny tanjona teo amin’ny voka-dehibe.
– Nanatanteraka ny fifampiarahabany ihany koa ny mpianakavin’ny finoana izay nanatrika ny fanompoam-pivavahana androany ka ny teny nifampiarahabana dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 19 : 9 : “ Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’i Abrahama koa”.
Izao kosa ny teny nifampiarahabana : « ARAHABAINA IANAO RY ZANAKY NY FAMONJENA »
FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSINGERINTAONA NAHATERAHANY
Niarahaba ireo nahatratra ny tsingerintaona nahaterany tamin’iny volana desambra lasa iny ny Fiangonana. Ny Soratra Masina nentina niarahaba azy ireo dia araka izay hita ao amin’ny Hebreo 13 : « Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory.”
Nanatanteraka vavaka ho azy ireo ny Fiangonana ary rehefa izany, dia nanao ny rakitra teny amin’ny alitara, izy 65 mianaka izay nahatratra izao tsingerintaona izao.
FIARAHABANA IREO ZOKIOLONA
Ny teny nentina niarahaba ireto Zokiolona ireto dia araka ny Fitomaniana 3: 25.
Taorian’ny fanomezana ny Tenin’Andriamanitra dia nanao vavaka fisaorana an’Andriamanitra ny Fiangonana noho ny fananana ireto ray aman-dreny zokiolona ireto ary koa nanao vavaka fangataham-pitahiana ho azy 176 mianadahy.
Ny Biraon’ny Fiangonana RALAINDIMBY Haja no namaky izany.
Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana izay nanatanteraka ny voady sy raki-pisaorana : FFPM 460 : 3 ; FF 39 : 2.
FIARAHABANA NY MPITANDRINA
Tamin’ity fotoana ity no niarahabana ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina mivady sy ny ankohonany noho ny fahatratrana izao taona vaovao izao.
Ny Biraom-piangonana RAZAFIMAHARO Mamy no nisolotena ny Fiangonana ka miarahaba azy ireo sy nanao ny teny firariantsoa.
Ny Birao, Andry RAKOTOMANANA kosa no nitari-bavaka.
Noharabaina niaraka tamin’ny Mpitandrina ihany koa moa Ramatoa RAMINO Vololona.
NISY NY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO IZAY NANASANA NY MPIANAKAVIN’NY FINOANA ARY NY VAHINY IZAY NANATRIKA IZAO FOTOANA IZAO.
"Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara" (Hebreo 10 :24) "Famindrampo sy fahamarinana no ho an'izay manao asa tsara. Amen! » (Ohabolana 14 :22).
Soratra : RABAKO Tovohery
Fanamafisam-peo : RANDRIAMAHEFA Tinarivony
Sary : HARENTSOA Rova